トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan farqiga u dhexeeya maaliyadda macaamiisha iyo Yamikin
Si ka duwan bangiyada iyo ururada deynta, maaliyadda macaamiisha waxaa laga yaabaa in dadka qaar maleeyo in ay xirfad adag tahay in ay kaas oo ku lifaaqan image ah.
Nakaniwa, labo ka mid ah maaliyadda macaamiisha iyo Yamikin ma oga farqiga, Dadka qaarkood loogu yeedhi doonaa.
Si kastaba ha ahaatee, ku dhaqanka, labada leeyihiin farqi aad u weyn waa tiro ka mid ah, oo ma oga in in, waxaa sidoo kale waa wax macquul ah ee waday halis weyn.
wakhtigan waa sida, waxaan soo bandhigi doonaa ah oo ku saabsan farqiga u dhexeeya maaliyadda macaamiisha iyo Yamikin. tixraaca /
arki / marka href = "http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/index.html"> lacagta bangiga faa'iidada iyo khasaaraha
inuu shaqaalayaal u kireeyo lacag macaamilka maaliyadda
waa maxay farqiga u maaliyadda macaamiisha iyo Yamikin ? Ma
u muuqdaan in ay maaliyadda macaamiisha iyo dahab madow, laakiin labada dheeraad ah in loo qaybin karaa haddii ganacsade ah ayaa lagu arkay dalka yihiin, waxa ay leedahay farqi aad u weyn. Tan iyo
si gaar ah waxaa ka mid ah kuwa sida soo socda, Haddii aad ka fekereyso inaad amaahashada lacagta Isku day inaad riixaya si fiican marayso.
in ama aan ganacsi lacag amaahdo ee diiwaangelinta waxaa lagu fuliyay
la tilmaamayaa karaa sida farqiga u dhexeeya laba First of dhan, waa in joogitaanka ama maqnaanshaha of diiwaangelinta lacagta daynta ganacsiga.
maaliyadda macaamiisha waxaa aad ka diiwaan gashan, ma waxa uu noqday Yamikin ah.
mabda, xirfad u tahay in ay heshay diiwaangelinta shaqo ganacsi lacageed amaahda waxaa waajib ku ah inay fuliyaan hawlgallo ka leexinayn ee sharciga, hubinta la sameyn doonaa.
Haddaba sidaas daraaddeed, haddii ay jirto diiwaangelinta ganacsiga lacagta daynta ah, ma samayn doonaa danta u qaali ah ama ururinta sharci-darrada ah.
Intaa waxaa dheer, waxay u baahan tahay tiro ka mid ah phone go'an in ay iska diiwaan gelin, Yamikin in uu ka diiwaan gashan telefoonka gacanta si ay u baxsadaan karaa wakhti kasta (080 maaliyadda oo la caan gudbiyo) waxa lagu gartaa. The
lacagta daynta diiwaangelinta ganacsiga, nooc ka mid ah cadeyn u tahay in xubin ka mid ah dalka waxaa lagu go'aamiyaa Japan Association Adeegyada Maaliyadeed. Marka fulinta codsiga
ah, kaas oo waa tallaabo in la samayn karaa si kalsooni leh caching, in aad hubiso in aad leedahay Had iyo jeer hubi ka hor codsiga.
in diiwaangelinta lacagta daynta ganacsiga, sida tirada iyo tirada updates la siiyo waqtiga diiwaangelinta, xirfad casri ah waa mabda'a ah in waxa ku qoran bogagga internetka iyo dukaamada.
Si kastaba ha ahaatee, in ay dhacdo xirfada tahay in lagu sameeyo howlgalka xaasidnimo ah in la bilaabay Yamikin, jiro kiis ah oo uu soo tilmaamay tiro diiwaangelinta abuur this for faa'iido ah ee xaqiiqda ah.
si lama filaan ah oo kaliya by eegaya muuqataa sidoo kale in ay dhab ahaan ku danbayso haddii ay dhacdo in ay soo amaahday lacag ah oo dahab ah oo gudcur ku badheedh u badan ka, dadka qaarkood ma dareemaan in ay tahay been abuur.
markaad codsanayso amaahda shirkado aad u aqoon, aynu tallaabooyin sida ay isku dayaan in la helo tirada maamulka internetka ama wixii la mid ah.
uu jiro farqi u maareynta hooyada
Maaraynta Maaliyadda macaamiisha
hooyada waa ugu halkaas oo lacagaha, sida bangiyada iyo shirkadaha maaliyadda ayaa si habboon loo diyaarsho.
Dhanka kale, dahab maamulka gudcur hooyada, inta badan qawlaysatada.
helay lacag ururinta ayaa sidoo kale inta badan waa kiiska in loo isticmaalaa sida fund waxqabad.
labada hab this, noqon sida magacyada shirkadaha la mid yihiin, waxa sheegay in ee asalka ah waxaa jira farqi weyn.
Intaas waxaa sii dheer, farqiga this sidoo kale u muuqda in ay kala duwan ee hababka maaraynta iyo baaritaan amaah iyo habka ururinta. In
maaliyadda macaamiisha si hooyada maamulka lama filaan ah ku siin lahaa kicitaan ah, waxaa ka heli doontaa dib u eegis ah oo shuruudo gaar ah, waayo, amaahashada.
Sidaa darteed, halka ay sidoo kale inta badan waa diidaan codsiga farsamo, ka yar in kiiska loo soo kor u siinaya in jahawareer aan la oofin waxa lagu gartaa.
In lacag gudcur ee, ka mid ah oo kale oo leh xeerar u gaar ah, si amah ah xitaa qofka saaray caadi ahaan loo yaqaan "liiska madow" ku.
waa qayb ka mid ah aad dareento xataa gacan kuwa dhibaataysan ee lacagta ugu horeysay jaleecada, laakiin sabab la'aan in ay jirto wax badan hadal macaan, dhihi lahaa in ururinta adag tuug gaar ah waxaa sugaya. In the case of
maaliyadda macaamiisha, sidoo kale marka la eego ururinta, waxaa la sameeyaa hab waafaqsan sharciga.
ma xoqin credit ee hooyada maamulka, maxaa yeelay, macaamil ganacsi ee fikirka loo sameeyaa in ganacsi faa'iido midba midka kale.
Si kastaba ha ahaatee, in ay dhacdo oo dahab ah gudcur laga yaabaa in sidoo kale loo gudbiyo lacag xataa in laba ka mid ah, iyo, habka ururinta waxa lagu gartaa xataa maroorsaday waa. Sida sharciga
hab in gabi ahaanba iska indho, maxaa yeelay, trumps ee kasta, sida joogitaanka iyo goobta shaqada, ku siinayaa saamayn qoto dheer nolosha laftiisa ee dadkeeda.
uu jiro farqi weyn oo dusha dulsaarka
lacagta dulsaarka ee
maaliyadda macaamilka, ayaa la dhigay 20% ka mid ah xadka sare ee wixii la goostay by sharciga. Haddii lacagta amaahda waqtiga codsiga
uu yahay mid yar iyo, haddii caddadka wadareed amaahatay yar yahay, waxa ay sidoo kale amaahan kartaa ilaa 10% oo dulsaarka hoose. Inkasta oo bidix iyo midig ee dakhliga
oo dusha dhaqanka, ha ka welwelina lilan si weyn lacagta dulsaarka.
Si kastaba ha ahaatee Yamikin waa inta badan waxaa la siiyaa oo 3,000% ka 1000%, dulsaarka sida in ay iska indha sharciga weyn. In
caadi ahaan loo yaqaan "Toichi (xiiso yahay 10% ka dhacay 10 maalmood), chitosan (xiiso yahay 30% ka dhacay 10 maalmood)," foom yidhi, ayaa waynaatey lahaa inuu baraf ah, awood ay si dhakhso ah bixiso waxa uu noqon doonaa.
heshiis dhabta ah halkii boqolkiiba a, tan iyo lacagta dulsaarka oo keliya ayaa lagu soo daabacay, ma dhowr qof oo buuxi lahaa habka aan u malaynayaa in lacagta aad u badan oo ah lacag.
maamulka Kooban sidoo kale
sidoo kale maaliyadda macaamiisha dahab gudcur, lacagaha deenta, waa in dulsaarka ka helay.
Si kastaba ha ahaatee, Yamikin xirfad u tahay in sameynayo howlgalka hab in iska dhega sharciga, waxaa lagu gartaa in ay qaataan aad u maroorsaday qabsadaan qayb ka mid ah heerarka ururinta iyo danta.
sidoo kale si ay u qabtaan caching ah in uu noqon karaa nabadda ee maskaxda, waa waqti aad u soo amaahato lacag Isku day in ay ka faa'iideystaan ??maaliyadda macaamilka.
sidoo kale maaliyadda macaamiisha dahab gudcur sidoo kale, lacagaha deenta, waa maamulka ee dulsaarka ku helay.